Home » Apụta » KHQ-TV Supercharges Digital Video na Ejiri, Bitcentral's Linear on Demand Streaming Solution
Ọtụtụ ọnwa gara aga, edere m otu isiokwu na Bitcentral, bụ onye na-enye ndị na-eweta usoro mgbasa ozi nke ọma maka ọrụ ha na-arụ ọrụ mgbasa ozi na nnukwu FUEL ha tụrụ anya yaTM ngwangwa nyocha nke igwe. Njikwa ọkụ na-enyere ndị ọrụ TV aka na ndị na-eweta ọdịnaya iji mepee ọwa mmiri ọhụụ ọhụrụ site n'inye ndị na-ekiri ha nhọrọ ịlele ozi ọma site na mmalite oge ọ bụla ha chọrọ, nke a na-eme ka ha hụ mmasị ha na TV, ekwentị, mbadamba ma ọ bụ kọmputa. FUEL na-enyere aka imeri enweghị ego na YouTube, Facebook na ihe ndị dị otú ahụ site na ịjụ ọdịnaya na mgbasa ozi ọha na eze ma tinye ya na nchịkwa mgbasa ozi. Nke a bụ onye na-agbanwe ngwa ngwa maka ndị mgbasa ozi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ihi na FUEL na-enye ha ngwá ọrụ ndị kwesịrị ekwesị, ngwaahịa kwesịrị ekwesị na nchịkọta nchịkọta iji nyochaa ọdịnaya ha na mgbasa ozi n'ozuzu niile. Na nke ahụ kwuru, anọ m na-eche maka mmeri nke mbido ịmepụta nkà na ụzụ na amụma m. N'ụzọ dị mwute, anaghị m ichere ogologo oge Bitcentral emeghị ihere.
KHQ mgbasa ozi Cowles na Spokane, WA, ka esiri na nso nso a Bitcentral's FUEL digital platform into their newsroom workflow. KHQ chọrọ ụzọ dị mfe maka ịmepụta dijitalụ dijitalụ iji nweta ihe onwunwe ha dị na ya ga-eme ka ndị na-ekiri ihe na-ekiri ha nwee njikọ, si otú ahụ na-emepụta mgbasa ozi ndị ọzọ. Mgbe ha jiri nlezianya na-eme nchọpụta nyocha nke nkà na ụzụ, KHQ tụgharịrị Bitcentral iji nweta FUEL's Linear on DemandTM arụ ọrụ ntanetị na arụmọrụ, nke na-enyefe akụkọ n'ozuzu ya na ngwaọrụ niile na ntanetị di iche iche ahaziri onye ọ bụla anya.
"Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu banyere ijikọta usoro mgbasa ozi a na-egosi na ọ ga-agbanwe mgbasa ozi mgbasa ozi ruo mgbe ebighị ebi," ka Neal Boling, bụ onyeisi ndị ọrụ Cowles kwuru. "Anyị na-atụ anya ịhụ otú FUEL nwere ike isi mee ka ọnụọgụ ọhụrụ dijitalụ jiri akụ anyị dị ugbu a. Ọ bụ oge na mgbasa ozi dijitalụ na-anọnyere ndị nwe ụlọ, na FUEL na-eme nke ahụ maka anyị, "ka Boling kwukwara. Maazị Boling kwupụtara na Nzukọ Ngwá Ọrụ News nke ọnwa gara aga na-ekwu banyere ọganihu nke ụlọ ọrụ ya na ọrụ FUEL nke arụmọrụ na-arụ ọrụ nke mbụ, nke na-ekpuchi ndị na-ahụ maka ozi maka mgbasa ozi, na ịnye ọdịnaya dị ka ọ na-ere maka oriri na-ege ntị ozugbo, dochie mgbasa ozi ikuku na mgbasa ozi dijitalụ ezubere iche.
Fred Fourcher, Bitcentralonye nhazi na CEO kwuru na ụlọ ọrụ ahụ nwere obi ụtọ ịhụ KHQ na - erite uru site na FUEL nke atụmatụ zuru ezu. "Cowles bụ nnukwu egwuregwu maka ọkụ n'ihi ọtụtụ ụlọ ọrụ ha na ọchịchọ ha iji nweta ma gbasaa ọdịnaya dijitalụ na ụlọ ọrụ ha," ka Fourcher gara n'ihu. "FUEL na-enye ahụmahụ ngosi nke onwe ya dịka TV, nke na-eme ka ogologo oge nyocha, nke na-eme ka ndị ahịa anyị nweta 'ọdịnaya vidio n'ịntanetị.'
Mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ nke ọdụ ụgbọelu na-adị n'ịntanetị, ndị na-akpọsa mgbasa ozi na-enweta nanị akụkụ nke ọnụọgụ mgbasa ozi n'ịntanetị nke ha nwere ike ijide. MGBE a na-agbanye gburugburu ya na ngwa ngwa ya na-ejikarị arụ ọrụ, ọ na-eme ka ọ dị mfe "ịmepụta ọwaiche ahaziri" - nke jikọtara ya na ahụmahụ ọhụụ dị ukwuu na-ebute oge elele anya 4X. Ndabere ala maka ụlọ ọrụ TV bụ oge elele anya, mgbasa ozi ndị ọzọ, na ego ndị ọzọ. Ọ bụghị ihe mmeri meriri.
Ụgha & Akụrụ Ultra HD Forum virtual eziokwu	2018-10-17
Previous: M & E Evolution Na-enyere Nlekọta Ọrụ Ihe Omume Anya
Osote: V-Nova na-enweta ego siri ike n'aka Novator Partners